Tradescantia: nlekọta ụlọ, foto na uru bara uru - Mkpụrụ ubi - 2019
Tradescantia ụlọ: nlekọta ụlọ, foto na uru bara uru
Tradescantia - osisi ime ụlọ, nke na-achọ ka ọ bụrụ nke kachasị anya, mana ọ bụ ihe mara mma nke ime. N'ihi nchikota nke àgwà ndi a, osisi ahu enwetawo ihe di otua a n'etiti umu nwanyi ndi ozo.
Na ma ị nwere ike ịdọrọ ifuru na Tradescantia, ị ga-amụtakwu ihe n'isiokwu ahụ.
Transplant na kwachaa
Lee anya foto nke ime ụlọ ime ụlọ Tradescantia:
Na floriculture nke oge a, osisi osisi dị iche iche aghọwo ihe a ma ama, n'ihi ihe ụfọdụ, a na-ewere Tradescantia dị ka ifuru dị oke mfe ma malite ịhapụ site nchịkọta ụlọ. Ọ bụ ezie na ụda dị iche iche nke akwụkwọ dịgasị iche iche, ọ dị mma.
Tụkwasị na nke a, ifuru a nwere ihe omumu ọgwụ. O kwesịrị ijide n'ụlọ ya, n'ihi na ọ na-echebe ya pụọ ​​na ike na-adịghị mma. Ụlọ nke Tradescantia ga-abụ onye nchebe gị pụọ n'ire dị iche iche, ga-etinyechapụ anyaụfụ na asịrị ndị iro gị.
Na mgbakwunye na obi, nke a ifuru ga emetụta ụdị ahụ gị, dị ka ntụgharị maka ikuku nke ụlọ ahụ ma n'otu oge ahụ wetatụ. Ịkwụsị ihe niile na-emerụ ahụ ma n'otu oge ahụ na-ahapụ mmiri, Tradescantia na-eme ka ikuku dị ọcha ma baa uru na iku ume mmadụ.
Ọ bara uru karịsịa ka ị nọgide na-arụ ọrụ na kichin iji chebe onwe ya pụọ ​​na mmetụta ndị na-emerụ ahụ nke ọkụ eletrik.
Na nkà mmụta ọgwụ, epupụta nke osisi na-eji na-emeso Juda, purulent ọnyá. Osisi a nwekwara ike igbasa hematomas na ọnyá ọrịa. Rinse decoction nke epupụta na-eji maka paradontosis. A na-etinye n'ime ime ụlọ dị ka onye na-egbochi ọrịa diarrheal. Na mba ụfọdụ, a na-emeso ọrịa shuga na ụkwara nta na ya.
Tradescantia bụ ezigbo onye na-agwọ ọrịa n'ụlọ. A na-etinye akwụkwọ ọhụrụ na ọnyá, hematomas, ikpo ume iji belata mbufụt, gbochie suppuration. Maka afọ ọsịsa, a na-agbaji spoons nke epupụta otu iko mmiri na-esi esi mmiri ma were ugboro abụọ kwa ụbọchị tupu nri. Maka nsị nke glands, a na-atụ aro ka a na-emepụta ihe ọṅụṅụ mmiri tradescantia ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Na oyi, a na-eji mmiri eme ihe n'ụdị tụlee.
Ụdị tradescantia na-atọ ụtọ nwamba. Ya mere, oburu na ichoghi ka eri ahihia nile, wepuo okoko osisi ka anyi buru ihe ndi ozo.
Enwere m ike ịdebe ifuru na Tradescantia? N'ezie i nwere ike. Otú ọ dị, e nwere echiche na ndị na-arị elu elu, na tradescantia na-ezo aka kpọmkwem na ha, na-achụpụ n'ụlọ mmadụ na ọbụna na-eduga n'ịhụnanya zuru oke.
Ị nwere ike ịmatakwu banyere ihe ndị na-agwọ ọrịa na contraindications nke Tradescantia na vidiyo dị n'okpuru:
Lezienụ anya na ụdị ndị ọzọ dị n'ime ụlọ, nke nwekwara ọtụtụ ihe bara uru. Dịka ọmụmaatụ, Roicissus "home birch", ornamental plant Alokaziya, na-ewu ewu maka ọgwụgwọ ya, osisi dị nsọ nke ndị Ficus Alakụba, nakwa ndị a ma ama n'etiti ndị nọ n'okpuru aha ndị dị ka "Teschin tongue", "Snake skin", "Shchuchy tail", osisi dị nnọọ unpretentious Sansevieria.
Ka anyi nyochaa uzo esi eche Tradescantia anya n'ulo.
Nlekọta ụlọ na-achọ ihe pụrụ iche. Ya mere, ọ dị mkpa n'ime ụlọ nwere ìhè kachasị na anyanwụ na ọkụ ọkụ.
Ụdị dịgasị iche iche na-achọkarị ọnọdụ ọkụ. Site n'enweghị ìhè, epupụta na-agbanwe icha ma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mana n'otu oge ahụ, a ga-echebe osisi ahụ site na ìhè anyanwụ kpọmkwem. Site na nke a, ha nwere ike gbanwee edo edo. N'oge ọkọchị, ọ dị mma ịkwado Tradescantia na mbara ihu ahụ, na-ehichapụ site na anyanwụ ma na-echebe ya site na nchịkọta na ikuku. O nwekwara ike ịkụ osisi n'ime ebe a na-agbanye n'ọhịa n'ime akwa ifuru.
Ọnọdụ okpomọkụ nke okooko osisi Tradescantia kachasị mma, site na 10 ruo 22 ogo (n'oge oyi adịghị elu karịa 15). Ọzọkwa, ha chọrọ oke iru mmiri dị elu. Ọ bụrụ na ọnụ ụlọ ahụ dị oke ikuku, a ghaghị ịkụnye osisi ahụ.
Tradescantia hụrụ mmiri n'anya n'ụlọ, ya mere Mmiri dị ya mkpa na mgbe niile. Akpanye nke ụwa kwesịrị ịdị mgbe niile, ma ọ bụghị mmiri. Mmiri mmiri na-adịghị mma anabataghị ya, ọ ga-eme ka mgbọrọgwụ gbaa. Icha ala n'ime ite maka ifuru a bu ihe ojoo. Ke ini etuep, ugboro ugboro nke atọ na-ebelata.
Kwa afọ abụọ ma ọ bụ atọ, Tradescantia ga-ebugharị n'ime ala ọhụrụ ma banye nnukwu tank. A na-ewepu ndị agadi ka ha na-eto eto.
Ikwesiri igbutu mkpuru osisi di ogologo, nke na-eme ka ihe ndi mmadu na-acho uzo ma me ka ihe di mma nke osisi.
Iji chebe mmetụta a na-achọ mma, ọ dị mkpa iji wepụ akwụkwọ niile a mịrị amị ma ọ bụ ị ga-ewepụ, nke ebe ọhụụ na-apụta. Osisi ndị toro ogologo na-eto eto n'otu ite, mgbe ahụ, ohia ahụ na-adọrọ adọrọ ma mara mma.
Ọnọdụ ala nke ala na-adabere na ala nke o toro. A na-ahọrọ ihe nke mkpụrụ ahụ dabere na ụdị dị iche iche. Maka iche iche di iche iche adighi ebuli oke ohia, ma oburu na akwukwo a ga agbapu oku ha.
Ezigbo maka ngwakọta ahịhịa nke turf, ájá na humus (1: 1: 1). Mgbe ịzụrụ ala a rụchara, nye mmasị na ogige nwere nnukwu ọdịnaya nke potassium na phosphorus.
Na nri, mkpa okooko osisi n'oge dum vegetative. Fatịlaịza jikọtara ọnụ na atọ n'izu ọ bụla ọzọ. Ngwakọta ọ bụla kwesịrị ekwesị maka osisi ndị a na-achọ mma na osisi ndị dị na ya.
Mkpa! Maka ihe dị iche iche ọ dị mkpa iji fatịlaịza pụrụ iche.
Dị ka ọtụtụ osisi n'ime ụlọ, tradescantia na-agbapụta n'ụzọ dị iche iche:
Cuttings. Usoro a bara uru kwa afọ. Osisi osisi gbanyere mkpọrọgwụ ngwa ngwa ma na ala ma n'ime mmiri, na-esote ya na akụ na ite. N'ime otu akpa maka ihe ka mma, 5-6 cuttings nke 10-15 cm n'ogologo ka edobere ozugbo.
Nkewa nke ohia. Ụzọ kachasị ngwa ngwa nke mmeputakwa, na-enye gị ohere ịghọ osisi toro eto dị iche. A na-eke ohia mgbe a na-atụgharị ya na mmiri. Tupu ịkewa mgbọrọgwụ mmiri nke ọma, mgbe ahụ, a na-ekeji ohia ahụ n'akụkụ abụọ ma nọdụ ala.
Ịgha mkpụrụ. A na-eme ya n'oge opupu ihe ubi na Mini-greenhouses. A na-edozi mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ site na ngwakọta nke peat na ájá. Mbadamba peat dị mma maka ịgha mkpụrụ, nke a na-etinye osisi na kpuchie ájá site n'elu. Maka germination, ọ dị mkpa inye okpomọkụ nke ọbụlagodi ogo 20. A na-ehicha mkpụrụ ahụ mgbe niile ma na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme mgbe niile.
Mụtakwuo banyere àgwà nke nlekọta ụlọ maka Tradescantia n'ihu na vidiyo:
Gịnị mere tradescantia ji kpọnwụọ, ọnụ ọgụgụ ha na-ebelata, na ị ga-akpọnwụ wee gbanwee edo edo? Ihe ndị a na-akpata ọrịa ndị a na-ejikọta ya bụ imebi iwu nke mmezi. Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe ọ bụla na-arịa ahụike, ịkwesịrị idozi nsogbu nke nlekọta:
Ịbelata ọnụ ọgụgụ nke epupụta ma ọ bụ ịmịkọrọ ha na agba aja siri ike na-egosi enweghị ìhè;
Ụjọ, yellowness nke ị ga na epupụta - mgbaàmà nke enweghị mmiri na ala;
Tradescantia na-eme ka akọrọ na ikpo ikuku;
A na-eji aphids, efere ududo, na ọta emetụta tradescantia. Ụmụ ahụhụ ndị a na-ebu ụzọ na-aga n'ihu n'okpuru epupụta, jiri nwayọọ nwayọọ kpuchie efere dum. Osisi ahụ na-amalite ịnwụ ma nwedịrị ike ịnwụ.
Na-ebute ọdịdị nke pests, nakwa dị ka mmepe nke ọrịa, mebiri ọnọdụ eji eji. Dịka ọmụmaatụ, ọnyà ududo na-amụba n'ihu ọnụnọ ikuku.
Na nrịbama mbụ nke ọdịdị nke pests, ọ dị mkpa ịsacha tradescantia na mmiri ọkụ na ngwọta nke nchacha ncha. Mgbe ahụ, a ghaghị ịgwọ ya na ụmụ ahụhụ.
Na saịtị anyị, anyị kwadebeere gị isiokwu ndị na-adọrọ mmasị ma na-enye nkọwa banyere Tradescantia. A na-achọta ihe dị n'ime ihe a dị nnọọ irè ma bụrụ nke na-adịghị mma na nlekọta ahụ bụ "Zebrin", nke kachasị ewu ewu.
Nweta osisi a na-adọrọ adọrọ maka nchịkọta ụlọ gị. N'iji nlezianya na-elekọta, Tradescantia ga-achọ mma n'ime ime ụlọ gị ma nwee mmetụta bara uru na ikuku ya.
Ọ bụrụ na enwere nkụbibi na ụlọ: ihe dị iche iche dị na otú e si alụ ọgụ ha?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Tradescantia ụlọ: nlekọta ụlọ, foto na uru bara uru